Ọnụ ụzọ nke mgbe ebighị ebi: "Otu ụfọdụ: akụkọ nke anyị niile" | Akwụkwọ dị ugbu a
Uzo nke mgbe ebighi ebi
John Ortiz | 15/11/2021 15:15 | Akụkọ ndụ, Akwụkwọ, Novela
Nkwuputa nke Ken Follett kwuru.
Uzo nke mgbe ebighi ebi bụ akwụkwọ akụkọ ifo akụkọ ihe mere eme nke oge a sitere n'aka onye odee Britain meriri Ken Follett. E bipụtara ya na Septemba 2014 ma bụrụ nkeji nke atọ nke akwụkwọ akụkọ ahụ Trilogy nke narị afọ, nke a na-akwado ya Ọdịda nke ndị Refeyim (2010) na Oge oyi nke ụwa (2012). N'oge a, ndị protagonists bụ ụmụ nke ndị isi okwu nke aha ndị gara aga na saga.
Na trilogy a, onye edemede ahụ gosipụtara akụkọ ihe mere eme nke ezinụlọ ise sitere na mba dị iche iche na otu esi emetụta ha -Site n'ọgbọ - site ihe omume akụkọ ihe mere eme dị iche iche. Banyere nke a, Follett na-ekwusi ike, sị: “Nke a bụ akụkọ banyere nne na nna m ochie na nke gị, ndị mụrụ anyị na ndụ anyị. N'ụzọ ọ bụ akụkọ nke anyị niile. "
1 Nchịkọta nke ọnụ ụzọ nke ebighi ebi
1.1 Akụkọ malitere
1.2 East Germany
1.3 Na United States
1.6 The ezi akara aka
3 Banyere onye edemede, Ken Follett
3.1 Ọrụ ọkachamara
3.2 Ọrụ edemede
3.3 Ken Follert na-arụ ọrụ
Na nchikota nke Uzo nke mgbe ebighi ebi
Akwụkwọ ọgụgụ malitere na 1961, afọ 16 ka Agha Ụwa nke Abụọ biri. Anyị na-ekwu maka oge mgbe ndị ike dị ukwuu ejirila uru - n'etiti ha, Russia, mba kasị ukwuu na Soviet Union. Ndị Rọshịa manyere ozizi ndị Kọmunist ha n’akụkụ nile ahụ ruo mgbe ha rutere Jamanị, nke mere ka ndị Germany malite ịgbahapụ obodo ha.
Nke a akụkụ kpakpando ya Rebeka, onye nkuzi East German nke ezinụlọ Franck - nwa nwa nwanyị Maud - onye otu ụbọchị natara akwụkwọ ikike n'aka ndị Stasi - nzuzo uwe ojii nke German Democratic Republic (GDR) -. Nke a masịrị ya ozugbo, n’ihi na ọ maghị ihe mere o ji nye iwu. Otú ọ dị, ọ ka na-aga n'ụbọchị ahụ e kwuru. Mgbe ahụ, A gbara ya ajụjụ nke ọma.
Mgbe mkparịta ụka ahụ jọgburu onwe ya gasịrị, Rebeka Ọ chọrọ ịpụ n'isi ụlọ ọrụ Stasi ozugbo, ma ọ gbabara na di ya Hans. Ozugbo ahụ, nwanyị ahụ chọpụtara nke ahụ nwoke ahụ ghọgburu ya n'oge nile nke alụmdi na nwunye. Ọ ọ bụ Stasi lieutenant ma ọ lụrụ naanị ya iledo ezinụlọ ya.
Mgbe ị nụrụ ihe niile, Rebeka chọrọ ịgbapụ n'obodo ahụ, ma o nweghị ike, ebe ọ bụ na ọpụpụ ya dabara na iwu dị egwu sitere n'aka gọọmentị GDR. Ha ekpebiela ikewa "Germany abụọ" ka ha kwụsị ịgba ọsọ nke ndị ọkachamara na mba ahụ mgbe niile. Site n'oge ahụ, a malitere ịrụ mgbidi Berlin na-ewu ewu, na Rebecca nọkwa n'otu akụkụ ọnyà wee kewapụ ya, ya na ọtụtụ narị puku ndị Germany na nsọtụ nke ọ bụla.
Na United States
N'oge ndị ahụ, ọ nọ n'akụkụ nke ọzọ nke ụwa George jakes - Nwa Greg Peshkov-, nwa okorobịa nke jere ozi dị ka onye ọka iwu na nchịkwa nke President John F. Kennedy. Ọzọkwa, ọ bụ onye na-akwado ikike obodo nke american american na US mgba ya dugara ya isonye na ngagharị iwe na ndịda mba ahụ wee gaa njem nke Martin Luther King duuru na Washington.
Ken Follett kwuru.
George nọ na-arụ ọrụ na ịmepụta iwu gbasara ikike nha anya. Otú ọ dị, nke ahụ ghọrọ ihe na-abaghị uru ozugbo e gburu Kennedy. Ọtụtụ afọ ka e mesịrị, ọ malitere iso Bobby Kennedy na-arụkọ ọrụ, ọ bụ ezie na atụmatụ ya dakwasịrị ọzọ mgbe e gbukwara nwoke a.
Dave Williams Ọ bụ onye na-akwado akụkọ ihe mere eme na mpaghara Europe a. Site n'ebe ahụ, o nwere ike ịtụgharị uche na esemokwu nke kọntinent abụọ ndị ọzọ. Nwa okorobịa ahụ ọ rọrọ nrọ ịbụ onye na-egwu egwu ma soro ndị enyi ya guzobe otu egwu egwu. Ozugbo o nwere ihe ịga nke ọma, o ji abụ ndị ahụ kwupụta echiche ya banyere enweghị nnwere onwe na ikpe na-ezighị ezi.
Daalụ maka ịga nke ọma nke mkpokọta, ha gara na kọntinent America. N'ịbụ ebe ahụ Dave na ndị otu ya biri na San Francisco na sonyere na mmalite nke mmegharị hippie — Ndị America na-eto eto na-edu ugbu a maka njedebe nke Agha Vietnam.
Ọnọdụ ndọrọ ndọrọ ọchịchị na Soviet Union nke Follett na-egosi anyị adịghị mfe ma ọlị. Onye edemede ahụ na-etinye onye na-agụ ya ozugbo Khrushchev nwụsịrị na njide nke Brezhnev. Agha Nzuzo dara ma mebie ntọala nke ihe owuwu nke e weere na ọ gaghị emebi emebi n'oge ahụ. N'aka nke ya, na Russia, Gorbachev gbalịrị iji atụmatụ Perestroika zọpụta akụ na ụba obodo, ma mgbalị ya bụ ihe efu.
N'okpuru panorama a, ndị na-akwado akụkụ a pụtara: ejima Dimka na Tania. Ya, onye na-eto eto na pati komunist, kpakpando na-arị elu nke mmegharị ahụ; sgi nwanne, otu onye agha maka ọgbaghara. N'ihi ihe ndị ahụ e kwuru n'elu, ngagharị iwe ahụ mụbara - yana usoro ọjọọ ndị gọọmentị mere - nke mere ka ọdịda ọchịchị Kọmunist dịkwuo ngwa ngwa.
Mgbe usoro ihe omume a niile gasịrị, N’ikpeazụ, na Nọvemba 11, 1989, e kwaturu Mgbidi Berlin.
The ezi akara aka
Akụkọ ahụ mere n'agbata afọ 1961 na 1989 -Na mmepe zuru oke nke Agha Nzuzo. Onye ọ bụla agwa na-aga site na agha onwe ya. Ụwa na-enweta oge mgbagwoju anya nke ndị ukwu na-alụ ọgụ maka ọdịmma nke ha na-eburu n'uche ihe ga-esi n'omume ha pụta.
Uzo nke mgbe ebighi ebi bụ akwụkwọ akụkọ site na ụdị akụkọ ifo akụkọ ihe mere eme. Ọ na-etolite n'oge niile Akụkụ 10 nke n'aka nke ya na-ekewa n'ime isiakwụkwọ na nke ahụ gbakwunyere ụfọdụ 1152 peeji. Ọrụ bụ akọwara n'ụzọ ahịrị site n'aka onye na-akọ akụkọ ihe niile nke na-eji asụsụ dị mfe ma na-atọ ụtọ - àgwà ndị Follett zụlitere n'ime ogologo ọrụ ya na nke na-ejide onye na-agụ ya ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ ozugbo, ọ bụrụgodị na ha agụbeghị onye edemede mbụ.
Banyere onye edemede, Ken Follett
Kenneth Martin Follett—Ken Follet—amuru na June 5, 1949 na Cardiff, isi obodo Wales. Nne na nna ya bụ Venie na Martin Follet. Ruo mgbe ọ dị afọ 10, o biri n'obodo ya, wee kwaga London. Gbanye 1967, malitere ịmụ philosophy na Mahadum University nke London, agbụrụ na ọ kwụsịrị mgbe afọ atọ gachara.
N'afọ 1970, ọ gụrụ akwụkwọ akụkọ ruo ọnwa atọ, nke butere ya na-arụ ọrụ dị ka onye nta akụkọ maka afọ atọ maka South Wales ikwughachi, na Cardiff. N'ikpeazụ, ọ laghachiri London, ebe ọ rụrụ ọrụ na ụlọ ọrụ Ụkpụrụ mgbede. N'ọgwụgwụ nke 70s, o wepụrụ akwụkwọ akụkọ n'akụkụ wee dabere na ibipụta akwụkwọ, wee bụrụ osote onye isi njikwa nke Akwụkwọ Everest.
Ọ malitere ide akụkọ dị ka ihe ntụrụndụ, Otú ọ dị, ndụ ya gbanwere na mbipụta nke Anya nke agịga (1978), akwụkwọ akụkọ mbụ ya. N'ihi akwụkwọ a, o nwetara Edgar Prize, na mgbakwunye na nkwado mba ụwa. Ọzọ nke hit ya bịara na 1989 na Ogidi nke ụwa, na-arụ ọrụ na nke o ji na mbụ ahịa ọnọdụ na Europe ihe karịrị 10 afọ.
N'ime oge ọrụ ya, o bipụtala akwụkwọ akụkọ 22 n'ụdị akụkọ ihe mere eme na enweghị ntụkwasị obi. Ha pụtara n'etiti ha: N’ọnụ ọnụ dragọn ahụ (1998), Njedebe ikpeazụ (2002), Worldwa na-enweghị njedebe (2007) na Narị Afọ Trilogy (2010). N'ime akwụkwọ ya, 7 emezigharịrị maka telivishọn na sinima, na mgbakwunye na inye onyinye dị mkpa, dị ka: Bancarella Prize (1999) na International Thriller Writers Awards (2010).
Ken Follert na-arụ ọrụ
Island of Storm ma ọ bụ Anya nke agịga (1978)
Nwoke ahụ si St. Petersburg (1982)
Ugo nke ugo (1983)
Ndagwurugwu ọdụm (1986)
Ogidi nke ụwa (1989)
N'abalị n'elu mmiri (1991)
Akụ dị egwu (1993)
Ebe a na-akpọ nnwere onwe (1995)
Nke ejima (1997)
N’ọnụ ọnụ dragọn ahụ (1998)
Egwuregwu abụọ (2000)
Nnukwu ihe ize ndụ (2001)
Njedebe ikpeazụ (2002)
Na White (2004)
Worldwa na-enweghị njedebe (2007)
Narị Afọ Trilogy
Ọdịda nke ndị Refeyim (2010)
Oge oyi nke ụwa (2012)
Uzo nke mgbe ebighi ebi (2014)
Otu ogidi ọkụ (2017)
Ọchịchịrị na chi ọbụbọ (2020)
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akwụkwọ ndị dị ugbu a » Genres » Novela » Uzo nke mgbe ebighi ebi
Jacinta Cremades. Ajụjụ ọnụ onye ode akwụkwọ laghachi na Paris
Ọ dị mkpa ịnweta 4G na eReader gị?